Nofinofim-pilàna ara-nofo : Misy dikany ambadika…
Tsiambaratelo mampaharitra ny fanambadiana
Inona ny tsiambaratelo mampaharitra ny fiarahana sy mikolo ny fitiavana eo amin’ny olon-droa ?Mety fihetsika kely sy bitika izy ireny kanefa misy vokany. Atoronay anao ny santionany :
Ny atao haha-latsa-pitia azy tanteraka
Tianao ho latsa-pitia tanteraka aminao ve izy ? Azo atao ihany izany. Ireto misy torohevitra mety hanampy anao : Efa mba nifanerasera aloha
Torohevitra 5 hanadinoana tanteraka ny olon-tianao taloha
Vehivavy maromaro no nizara tamin’ny Jejoo ny fomba nanadinoany ny olon-tiany izay nandao azy sy nisaraka taminy. Azonao angalana hevitra izany satria nandaitra tamin’izy ireo.
Azo havotana ny tokantrano miha-rava…
Azo hatao ny manarina sy manavotra ny tokantrano mitady ho rava raha arahina ireto fitsipika 10 ireto. Tsy mora tokoa kanefa azo atao tsara :
Mihataka amiko izy, inona ny hataoko ?
Zavatra mety hitranga eo amin’ny mpifankatia ny hoe : toy ny mihataka izany ny an-daniny. Tsy dia mazoto miantso na mandefa someso toy ny tamin’ny vao niaraka. Fa inona ny mitranga? Tsy te-hiaraka aminao intsony ve izy? Tsy tia anao intsony ve izy ? inona ny hatao ?
Paikady 3 hatao dia tsy saro-piaro intsony
Ratsy avokoa ny vokatry ny hasarotam-piaro indrindra raha diso tafahoatra izany. Mampijaly ny sain’ny olona saro-piaro mantsy izany.
Liva : Tsy tiako intsony ny vadiko
Tranga mety miseho ao anatin’ny tokantrano koa ny hoe : tsy tiana intsony ny vady. Anisan’ny nahatsapa izany i Liva. Solon’anarana nosafidiany io fa tsy tena nomeny anay ny anarany mba hiarovana ny tokantranony :
Ara-dalàna, eo amin’ny olon-dehibe efa mahalala izany antsoina hoe : firaisana ara-nofo, ny manana nofinofim-pilàna na ilay antsoina hoe : “fantasme”.
Misy amin’izy ireny no azo tanterahina, misy kosa no mahamenatra, na fady, na mampitahotra ny vehivavy, saingy azo amantarana ny maha-izy ny tena sy ny filàna ara-nofo miafina kosa anefa. Voaboasanay aminao ny hevitr’ireto nofinofim-pilàna ireto.
Miray ara-nofo amin’olon-tsy fantatra : te hihoatra sakana
Isan-karazany ny toerana mety hitrangany, arakaraky ny vehivavy, saingy mitovy ihany ny zava-miseho amin’ny ankapobeny : mifanojo ny maso, miakatra ny filàna ary raikitra avy hatrany ny firaisana ara-nofo. Midika faniriana te hihoatra ireo sakana tsy ahafahana mianoka tanteraka ny firaisana ara-nofo izany. Ny vehivavy manana fiainam-pitiavana efa naharitra sy miaina rotoroto, mazàna, no manana io nofinofy io. Toa efa voafatotr’ilay fiarahana mantsy, ka lasa mionona fotsiny amin’ny mahazatra sisa. Manahy ihany koa sao hotsarain’ilay olon-tiana, raha mitondra zava-baovao ao anatin’ny fiainam-pananahana. Izany no mahatonga an’ilay nofinofy : miaraka amin’olona iray tsy fantatra, tsy misy eritreretina, tsy misy tanjona manokana, afa-tsy ny fahafinaretana, izay ihany !
Anaovana herisetra ara-nofo : filàna matanjaka sy mahery setra
Mahamenatra ny vehivavy, amin’ny ankapobeny, ny manonofy ny haolana, satria tsy misy tena maniry izany, amin’ny fiainana andavanandro. Mampiakatra ny faniriana hiray ara-nofo ao amin’ny vehivavy sasany kosa anefa ny manonofy izany. Tsy mitady ny hanaovana firaisana an-terisetra loatra anefa izy, raha ny tena marina, fa ny filàna ao anatiny no matanjaka be, saingy tsy sahiny ny mamboraka izany amin’ny olon-tiany. Ilay herisetra ara-nofo atao aminy dia toy ny midika hoe : ianao ilay mpanolana io no ataoko tomponandraikitry ny filàko, ka ataovy izay tianao atao amiko. Mety ho ilay vehivavy ihany koa no somary mahery setra eo am-panaovana firaisana ara-nofo, saingy miezaka mafy ny hifehy izany izy.
Miray amin’ny lehilahy tonga lafatra : Maniry hotiavina mafy
Fanirian’ny vehivavy maro ny hotiavain’ny lehilahy tonga lafatra. Eto kosa ilay izy dia tsy any amin’ilay lafiny rômantikan’ny fitiavana fotsiny, fa ny hiray ara-nofo amin’ny lehilahy be fitiavana, mahay manambitamby, tsara fanahy, mahafantatra sady mamaly tanteraka izay iriany… no nofinofin’ilay vehivavy. Fahafinaretana fara-tampony tonga lafatra ihany koa no katsahin’ny vehivavy manana ity nofinofim-pilàna ity, saingy amin’ny ankapobeny, tsy matoky tena izy sady tsy mahay manao izay mahasambatra ny tenany. Miankin-doha amin’izay olona iarahany foana izy, ka ny lehilahy no andrasany hitondra fahasambarana sy fahafinaretana ho azy, fa tsy hainy ny mandray an-tanana izany. Tokony hotadidiana anefa fa raha te ho tiana, dia mila mahay mitia ny tena aloha.